Nampisahotaka ny rehetra: nopotehina ireo grenady 35 hita teny Ambohidratrimo | NewsMada
Omaly tolakandro, teny amin’ny karieran’Ambohidratrimo, no nanapotehan’ny avy ao amin’ny ”corps de protection civile” ireo grenady 35 sy bala miisa 3, hitan’ny ankizy, tao amin’ny tokotanin’ny biraon’ny kaominina sy distrikan’Ambohidratrimo, omaly maraina. Nampisahotaka ny maro teny an-toerana ity tranga ity.
“Ankizy nisikotsikotra tany teo amin’ny faritry ny tokotanin’ny distrika no nahita ireo grenady maromaro nalevina tao anaty tany. Niantso ny rainy izy io ka io indray no nampandre ny zandary tao an-toerana”, hoy ny fanazavan’ny kaomanda miandraikitra ny seraseran’ny zandarimaria, Andrianarisaona Herilalatina. Nahitana grenady miisa 35 sy bala miisa telo teo amin’ilay tokotany, rehefa nanao ny fizahana, omaly, ny zandary sy ny miaramila.
“Nijery ifotony izany ireo zandary ka nandray fepetra avy hatrany nanala ny olona lavidavitra sy nanapaka ny lalana tsy ahafahan’ny olona mivezivezy hatreo amin’ny manodidina mba hisorohana izay mety ho loza haterak’izany”, hoy ihany ny fanazavana.
Tonga teny an-toerana ny miaramila avy ao amin’ny “corps de protection civile”. Izy ireo, efa manana ny fahaizana manokana amin’ny tranga toa izao. Fantatra fa grenady “inoffensives” ireo hita ireo.
“Ny fanohizana ny fikarohana ny lavaka nahitana fa grenady nalevina efa ampolo taona vitsivitsy ireo”, hoy ny fanamafisana. Nopotehina tamin’ny alalan’ny fanapoahana teny amin’ny “carrière” teny Ambohidratrimo ihany ireo fitaovam-piadiana ireo, omaly, tamin’ny 3 ora tolakandro. Nanokatra ny fanadihadiana kosa ny zandarimariam-pirenena.
Fitaovana avy aiza?
Mipetraka avy hatrany ny fanontaniana ny momba ireo fitaovam-piadiana marobe hita ireo. Ny fanazavan’ny zandary hatrany milaza fa nafenina ireo. Tokony ho fantatra kosa anefa ny fiavian’ireo fitaovana izay mazava ho azy fa an’ny miaramila. Tonga dia nopotehina ireo, saingy heverina fa efa am-pelatan’ny mpitandro filaminana ny mombamomba azy.
Ny filazan’ny tompon’andraikitra hatrany, fitaovana very nandritra ny krizy teto amintsika ireto hita ireto. Ny toy izao ny manaporofo fa nisy namoaka fitaovam-piadiana mahery vaika marobe nandritra ny olana ara-politika teto. Zava-doza ho an’ny fiarahamonina anefa raha sanatria ka ny olon-dratsy no nahita an’ireo, na nipoaka tampoka. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary manodidina ireto fitaovana hita tampoka teny Ambohidratrimo ireto.